China Direct Famakiana Brinell Hardness Tester HBS-3000 orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | KAIRDA
Famakiana mivantana Brinell Hardness Tester HBS-3000 dia rafitra mekanika mazava sy rafitra fanaraha-maso mikraoba mihidy amin'ny vokatra mechatronics, ny HBS-3000 dia mihatra amin'ny fizotran'ny asa sy ny andrana amin'ny orinasa mpamokatra entana, oniversite ary andrimpanjakana siantifika. Endri-javatra lehibe • Raisina ny rafitra fanamafisam-peon-loop mihidy sy ny rafitra fanaraha-maso elektronika. • Rafitra fanaraha-maso photoelectrique, misy hery ambaratonga 10. • Amin'ny alàlan'ny fidirana fanalahidy malefaka, ny fiovam-po eo amin'ny fomba fitsapana sy ny har ...
Famakiana mivantana Brinell Hardness Tester HBS-3000 dia rafitra mekanika mazava sy rafitra fanaraha-maso mihidy mikraoba amin'ny vokatra mechatronics, ny HBS-3000 dia mihatra amin'ny fizotran'ny asa sy fizahana orinasa mpamokatra entana, oniversite ary andrimpanjakana siantifika.
• Raisina ny rafitra fanamafisam-peo mihidy sy ny rafitra fanaraha-maso elektronika.
• Rafitra fanaraha-maso photoelectric, miaraka amin'ny herin'ny fitsapana 10.
• Amin'ny alàlan'ny fanalahidin'ny fanalahidy malefaka, dia azo fidina ny fiovam-po eo anelanelan'ny fomba fanandramana sy ny hamafin'ny maro.
• Ny data momba ny fizotran'ny asa sy ny valin'ny fitsapana dia azo aseho amin'ny efijery LCD.
• Ny tahirin-kevitra momba ny valin'ny fitsapana dia azo avoaka amin'ny alàlan'ny mpanonta.
• Ampifamadiho tanana ny lohan'ny tsindry sy ny solomaso kendrena.
Herin'ny fitsapana tanteraka 62.5kgf (612.9N) ， 100kgf (980.7N) ， 125kgf (1226N) ， 187.5kgf (1839N) ， 250kgf 250kgf (2452N) ， 500kgf (4903N) ， 750kgf (7355N) ， 1000kgf (8907N) ， 1500kgf 1500kgf (14710N) ， 3000kgf (29420N)
Hatra fitiliana 8 - 650 HBW
Fanamafisana ny tahan'ny mikraoskaopy 20 ×
Hatra mizana HBW2.5 / 62.5, HBW2.5 / 187.5, HBW5 / 62.5, HBW5 / 125, HBW5 / 250, HBW5 / 750, HBW10 / 100, HBW10 / 25, HBW10 / 500, HBW10 / 1000, HBW10 / 1500, HBW10 / 3000
Fotoana faharetana 50 ~ 60s
Fandraisana diplaoma farany ambany amin'ny famarana 0.625μm
Haavo ambony indrindra amin'ny karazana 220 mm
Ny elanelana misy eo amin'ny Center of Indenter sy ny Column 145 mm
Herin'aratra AC 220V / 50Hz
Ny haben'ny tester (L × W × H) 550 × 250 × 780mm
Ny lanjan'ny tester rehetra 123 kg
Latabatra fitsapana lehibe, antonony, V miendrika V
Indenter mateza matevina （φ2.5 amin'ny5 izay10mm）
Hantsana fanandramana mahazatraHBW / 3000/10 (150 ～ 250) HBW / 1000/10 (75 ~ 125)HBW / 187,5 / 2,5 (150 ~ 250)
Fanamarihana, karatra fiantohana
Sokajy mpisedra ny hamafin
Ny fitsapana mafy dia iray amin'ireo fomba fitsapana mora amin'ny fitsapana fananana mekanika. raha ny fitsapana henjana dia tsy fanandramana fananana mekanika, ilaina ny fiovam-po marina eo anelanelan'ny hamaf sy ny tanjaka.
1. Leeb Hardness Tester Natao araka ny Fitsipika farany an'ny The Leeb Hardness Test amin'ny fampiasana ny teknolojia microprocessor mandroso indrindra.
2. Ny hamafin'ny brinell (HB) habe iray (savaivony dia 10mm matetika) ny vy vy mafy dia apetaka amin'ny vatan'ny fitaovana miaraka amina enta-mavesatra (mazàna 3000kg) ary tazomina mandritra ny fotoana iray. Aorian'ny famoahana, ny tahan'ny enta-mavesatra amin'ny faritry ny indentation dia sandan'ny hamafin'ny brinell (HB), ary ny hery dia kilao / mm2 (N / mm2).
3. Hamafin'ny Rockwell (HR) raha kely loatra ny HB> 450 na ny santionany dia tsy azo ampiasaina ny fitsapana ny hamafin'ny brinell fa ny fandrefesana ny hamafin'ny rockwell. MAMPIASA cone diamondra misy zoro ambony 120 ° na baolina vy misy savaivony ny 1.59 sy ny 3.18mm hanindry ny tampon'ireo fitaovana refesina ambanin'ny enta-mavesatra iray, ary ny hamafin'ny fitaovana dia isaina avy amin'ny halalin'ilay fametahana. Misy refy telo araka ny hamafin'ny fitaovam-panadinana.
4. HRA: Io no hamafin'ny fahazoana milanja 60kg sy presseur conneite. Izy io dia ampiasaina amin'ny fitaovana mafy be (toy ny firaka mafy).
5. HRB: Ny hamafisana dia azo amin'ny alàlan'ny fampiasana entana 100kg sy baolina 1.58mm boribory vy mihamafy. Izy io dia ampiasaina amin'ny fitaovana manana hamafim-po ambany (toy ny vy miharo vy, vy atsivalana, sns.).
6. HRC: Ny hamafin'ny fahazoana milanja 150kg sy presser-drill-cone. Izy io dia ampiasaina amin'ny fitaovana mafy be (toy ny vy mihamafy.
7. Ny hamafin'ny vickers (HV) dia mikajiana amin'ny alàlan'ny fanindriana ny vodin-tany miaraka amin'ny enta-mavesatra latsaky ny 120kg sy ny impiry square cone impinger miaraka amin'ny zoro ambony izay 136 °. Avy eo, ny sandan'ny enta-mavesatra dia mizara ny velarantanin'ireo lavaka fampidirana.
Izy io dia mety amin'ny fandrefesana ny hamafin'ny vokatra firaka aliminioma.
Previous: Electric Superficial Rockwell Hardness Tester HRM-45DT
Manaraka: Elektronika Brinell Hardness Tester Wholesale HBE-3000A